कर्मचारीलाई चोरीको आरोप–छानविन समितिको राजिनामा – अख्तियारको छापा – Shasankhabar
बिहिबार, ०७ असोज २०७८
कर्मचारीलाई चोरीको आरोप–छानविन समितिको राजिनामा – अख्तियारको छापा
बुधबार, १७ बैशाख २०७७
चितवन । भरतपुरमा स्थापना गरिएको भरतपुर कोरोना बिशेष अस्थायी अस्पतालमा कर्मचारीहरुले रातको समयमा सामान ओसारेको भिडियो सार्वजानीक भएपछि विवाद बढेको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले रातको समयमा अस्पतालमा समान चोरी गरेको भिडियो भन्दै अहिले सिसि टिभी फुटेज सार्वजानिक भएको थियो ।
कोरोना आशंका गरिएका र संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि भनेर भरतपुर महानगरपालिकाले बनाएको भरतपुर कोरोना अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले सामान रातको समयमा पोको पारेर लगेको भिडियो वाहिरीएपछि अस्पतालको व्यवस्थापनको पारदर्शीतामाथी प्रश्न खडा भएका छन् ।
सार्वजानिक भएको भिडियोमा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले रातको समयमा अस्पतालको स्टोरबाट सामानहरु पोका वनाएर बाहिर निकालेको देखिन्छ । रातको समयमा उनीहरुले अस्पतालको स्टोरबाट समान छानेर निकालेर पोका÷पोका बनाएको देखिन्छ ।
अस्पताल भित्र रहेको पंखा,मास्क,सेनिटाइजर,मोनिटर स्क्रिन,बेगन,चप्पल,ग्लुस्टिक,सावुन छानी छानी उठाएर प्याक गरेको भिडियोमा देखिन्छ । समाना पोको पारेपछि स्टोर कोठामा वत्ती निभाएको देखिन्छ । केही समय पछि अध्यारो कोठामा मोवाइलको उज्यालोको साहारामा तिन जना नै प्रवेश गरेर पोका वनाएर राखेको सामान तिनै जनाले उठाएर लगेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । पोको संगै अन्य समान समेत खोजेको र लगेको भिडियोमा देखिन्छ ।
कर्मचारीहरुले आफुहरुले समान चोरी नगरेको बताएपनि भिडियो वाहिरीएसंगै अनेक प्रश्न उब्जीएकाछन् । ति कर्मचारीले रातको समयमै किन समान प्याक गरे ? चप्पल आफ्नैै खुट्टामा किन नापे ? स्टोर रुममा वलिरहेको वत्ती निभएर किन मोवाइलको वत्ती वालेर समान वोके ? मोवाइलको वत्ती वालेर अरु सामान पनि खोजी खोजी किन लगे ? उज्यालेमा समान प्याक अध्यारोमा वोकियो किन ? तिन जनाका लागि तिन पोका उस्तै समान वरावर जस्तो प्याक गरियो किन ?
अस्पतालका सामाग्री चोरी गरेको आरोप लागेपछि भरतपुर कोरोना नियन्त्रण कार्यदलले छानविन समिति समेत बनाएको थियो ।
छानविनका लागि वनेको समितिका संयोजक उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेलले काम गर्नु पुर्व नै घटनाका सम्वन्धमा राजनैतिक हिसावले वक्तव्य टिकाटिप्णी र सूचना आदानप्रदान भएकोले गैर राजनैतिक संस्था उद्योग संघको अध्यक्षको हैसतले उक्त समितिमा रहेर काम गर्नुले संघको भावना विपरीत हुनेभएकोले राजीनमा दिएको वताउनुभएको छ ।
भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग हेटौडाको टोलीले छापा मारेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाबाट आएको टोलीले अस्पतालका कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रारम्भीक चरणको अनुसन्धान सुरु भएको र कागजपत्र संकलन गर्ने काम भएको जानकारीदिइएको छ ।
कोरोना अस्पतालमा आर्थिक अनियमितता गरिएको आशंका समेत गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पताल संचालनका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।
रातको समयमा कर्मचारीले सामान ओसारेको सिसि टिभी फुटेज वाहिरीए पछि सामाग्रीको अनियमिता भएको आसंका गरिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले सामान चोरी गरेको आरोप लागेको छ ।
लोपोन्मुख वनकरिया समुदायले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदै
ओलीको मुद्दा आज सुनुवाइ हुदै
मोटरसाइकल चोर्ने पक्राउ
सोमबार, ०४ असोज २०७८
सन्दर्भ संविधान दिवसः कार्यान्वयनमा जटिलता र सन्तोष उस्तै
बुधबार, ३० भदौ २०७८
चितवनमा कोभिड वार्डका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएनन्
मङ्गलबार, २९ भदौ २०७८
चितवनको भरतपुर अस्पतालसँग जमिन छ , पार्किङ छैन
मङ्गलबार, २२ भदौ २०७८
गृहमन्त्री खाँणद्वारा कोशी कटान क्षेत्रको निरीक्षण